Feather tattoo inogona kureva pfungwa yekusununguka nokuti inosanganiswa ne shiri. Shiri dzinofungidzirwa semhuka dzisununguko uye ndicho chikonzero ivo vanogona kubhururuka kubva kune rumwe rutivi rwepasi kune rumwe. Mhemberero imwe chete kana iyo yakawanda inogona kutaura pamusoro pekutsvaga rusununguko. Uyezve, #feather inotaura zvakafanana pamusoro pechinhu chekufamba, pfungwa, kukwanisa kuwirirana nekuchenjera. Mhemberero dzinogona kureva avo vakapfuura, kubatana nevakafa.
Feather tattoos mamwe emhando dzakanakisisa dzekuti iwe unogona kuona zvakapoteredza. Iko isiri uye inokosha. Haasi munhu wese waunoona aya mavara. Paunenge uchitsvaga #tattoo design kuti utsvake rusununguko rwako, iyi tattoo inongova imwe chete yekuenda nokuda kwekunaka uye kukosha. Zvinomirirawo zvipo zvinowira kubva kudenga. Nhepfenyuro dzinorevawo Rusununguko, Chokwadi, Chiedza, Kachimbidzika, Kukwira, Kurwisana, Mhepo Yakakwirira, Nharo, Kururama, Ushingi, Vimbiso, Ushingi, Tariro, Kutaurirana kune rimwe divi, Rwendo rwemweya, Kutamba, Muchenjeri, Kurapa uye Kuora. Ma Tattoos akanyatsogadzirirwa kukupa iyo chizivo chaunoda. Kune marudzi akasiyana-siyana ematoto ayo unogona kushandisa mukuchinja maonero aunoita.
Ikoko hakuna rusarura pakati pepabonde kana zvichisvika kumatoto akadai. Nzira iyo mifananidzo yakashandiswa kuva fashoni ndeyekuti sei tichiona varume nevakadzi vakagadzirira kuinwa ne #design yakaita seyi.
Kushandiswa kwemapapiro emapapiro kunogona kusimbisa zvinhu zvakaita sechinhu. Feather inogona kuratidza unyanzvi, rusununguko rwokutaura, #ideas uye zvakawanda zvakawanda zvinosanganisira kutaura. Kana iwe wakatora nhaurirano iwe uchaona kuti kune marudzi akawanda ematenha emapapiro munyika. image source
octopus tattooGeometric Tattoosshumba tattooarrow tattootattoos kuvanhurudo tattooscat tattoosrip tattooselephant tattoomehndi designneck tattoosHeart Tattoosmwedzi tattoosbutterfly tattooscross tattooshenna tattootattoo ideastattoos for girlsmimhanzi tattoosrose tattooskorona tattooscherry blossom tattooarm tattooswatercolor tattoozodiac zviratidzo zviratidzocute tattoosdiamond tattoozuva tattoosbirds tattoostattoo yezisoFeather Tattooinfinity tattooangel tattoosflower tattoosfoot tattooseagle tattoosback tattoostribal tattooschifuva tattoosmaoko tattooshanzvadzi tattooscompass tattoosleeve tattoosscorpion tattooAnkle Tattooscouple tattoosshamwari yakanakisisa tattooslotus flower tattookoi fish tattooAnchor tattoos